Fanaovam-beloma an’i Lina Ben Mhenni, bilaogera Toniziana sady mpiaro ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2020 12:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, عربي, ਪੰਜਾਬੀ, Nederlands, Esperanto , Español, Français, українська, Italiano, Ελληνικά, русский, English
Lina Ben Mhenni, Jona 2013. Sary avy amin'i Habib M’henni, nahazoana alalana, Wikimedia Commons.
Maty teo amin'ny faha-36 taonany tamin'ny Alatsinainy 27 Janoary 2020 ilay bilaogera Toniziana malaza sady mpiaro ny zon'olombelona Lina Ben Mhenni.
Nisongadina tamin'ny revolisiona Toniziana nanonganana ny jadon'i Zine el Abidine Ben Ali nandritra ny 23 taona tamin'ny volana Janoary 2011 i Lina. Rehefa nanomboka ny revolisiona tamin'ny volana Desambra 2010 dia nandeha tany Sidi Bouzid sy Kasserine i Lina, izay nitaterany ny vaovaon'ny fihetsiketsehana voalohany indrindra talohan'ny nielezan'izany tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny firenena. Nanampy tamin'ny fampahafantarana ny heri-pamoretana nataon'ny manampahefana namonoana ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fotoana namerana indrindra ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tao Tonizia sy ny fanasivanana henjana ny Aterineto ny tatitra nataony .
Talohan'ny nirodanan'ny fitondrana, nibilaogy ary nanoratra momba ny toetry ny zon'olombelona tao amin'ny firenena izy tao amin'ilay bilaoginy nahazo loka, A Tunisian Girl. Mpandray anjara ato amin'ny Global Voices ihany koa izy ary nanoratra betsaka momba ny sivana amin'ny aterineto, ny famoretana atao amin'ireo bilaogera sy ny fahalalahana maneho hevitra teo ambany fitondran'i Ben Ali.
Nanohy ny fikatrohany tsy manam-pitsaharana i Lina taorian'ny revolisiona. Mpitsikera ny fanjakan'ny hetsika Islamista Ennahdha, izay nitondra niaraka tamin'ny antoko roa hafa nanomboka ny faran'ny taona 2011 sy ny fiandohan'ny taona 2014 izy. Tao anatin'io vanim-potoana io, mbola nitohy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny tsirairay, ​​ao anatin'izany ny finoana. Nahazo fandrahonana ho faty ihany koa i Ben Mhenni noho ny fanakianany ireo Islamista sy ny manampahefana.
Nanao fanentanana ho an'ny zo ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-kolontsaina ho an'ny Toniziana rehetra ihany koa i Ben Mhenni. Mpanohana mafatrapo ny zon'ireo olona naratra nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny revolisiona izy, anisan'izany ny zon'izy ireo tamin'ny fanonerana sy ny fitsaboana sahaza azy ireo. Tamin'ny taona 2016, nanomboka nanao fanentanana izy niaraka tamin'ny rainy Sadok Ben Mhenni, mpikatroka ara-politika sady mpiaro ny zon'olombelona izay nogadraina teo ambany fitondran'i Bourguiba (filoha taorian'ny fahaleovantenan'i Tonizia) tamin'ny fanangonana boky ho an'ireo voafonja mba hiadiana amin'ny fanaovana ny olona ho (silamo) hiringiriny any am-ponja. Nahangona boky miisa 45.000 mahery izy ireo tao anatin'ny roa taona.
Maty noho ny aretina nitaiza izay nitaky famindrana voa ho azy tamin'ny taona 2007 ity bilaogera nahazo loka ity.
Raha niresaka tamin'ny onjam-peo iray tao an-toerana tamin'ny 14 Febroary 2019 izy dia nanome voninahitra ny reniny i Lina noho ny fanomezana ny voa ho azy sy ny fanohanana ny fikatrohany. Hoy izy:
Thanks to her I got to live another 12 years I may not have lived, or I would have lived a prisoner in my own body. But I have fully lived these years thanks to her. I travelled, I moved, I filmed, I ran, I screamed, and I lived the Tunisian revolution, something I may not have been able to live…
Noho izy dia mbola afaka niaina 12 taona fanampiny indray aho, mety tsy velona intsony aho na mety niaina fanagadrana tato anatiko aho. Nefa afaka niaina an-taonany maro aho noho izy. Nandeha aho, nifindra, naka sary, nihazakazaka, nihorakoraka, ary niaina ny revolisiona Toniziana, zavatra izay mety tsy ho hitako akory…